कस्तो रङ छान्ने ? « News of Nepal
कस्तो रङ छान्ने ?
अहिले घरमा रङ लगाउने कुरामा धेरै मानिस सजग हुन थालेका छन्। केही अघिसम्म लाखौं खर्च गरेर घर निर्माण गर्नेहरू पनि वर्षौंसम्म घरमा रङ नलगाई बस्थे तर अहिले घर स्टिमेटको बजेटभित्रै रङका लागि पैसा छुट्याइन्छ।
रङले घरलाई आकर्षक बनाउने गर्छ, त्यसकारण घर बनाउँदा रङको छट्टै महत्त्व छ। नेपाली समुदाय घरमा लगाउने रङका विषयमा धेरै सजग हुन थालेका छन्। ग्राहकको मागअनुरूप नेपाली बजारमा स्वदेशी तथा विदेशी कम्पनीका विभिन्न रङ उपलब्ध छन्। नेपाली बजारमा एसियन, पशुपति, बर्जर, कन्साई नेरोल्याकलगायतका रङका ब्रँन्ड उपलब्ध छन्। अनेक गुणस्तर तथा कलर भेराइटीका साथै मानव स्वास्थ्य र वातावरणका क्षेत्रमा कुन रङले कस्तो असर गर्छ भन्ने विषयमा ग्राहकलाई आफूले प्रयोग गर्ने रङको विषयमा जानकारी पाउन कठिन ह छ।
नेपालमा उपलब्ध रङमा बाहिर तथा भित्र दुवै भागमा प्रिमियम, इकोनोमिक र रेगुलर गरी विभिन्न प्रकारका रङ उपलब्ध छन्। भित्ता रङगाउनुअघि लगाइने वालपुट्टी, प्राइमर, इमल्सन, डिस्टेम्पर आदि पनि रङकै उत्पादन हुन्। नेपालमा उत्पादन गर्ने पेन्टस्ले एक्स्टेरियर तथा इन्टेरियरमा स्पेसल इफेक्ट्स, उड फिनिस, इनामेल जस्ता कलर पनि उत्पादन गर्दै आएका छन्।
आजका दिनमा सर्वसाधारण घरको लुक्स बढाउन कुन रङ प्रयोग गर्ने भन्ने विषयमा चासो दिन थालेका छन्। साथै किचनमा कस्तो रङ लगाउने, लिभिङ रुममा कुन रङ लगाउने, बेडरुममा कस्तो लगायतका इन्टेरियर कलरिङ विषयमा पनि मानिस ध्यान दिने गर्छन।
घरको बाहिरी रङले घरको सुन्दरताको व्याख्या गर्छ। तसर्थ, घरको रङ अरुको भन्दा फरक सबैलाई आकर्षित गर्ने खालको हुनपर्छ। साधारणतया घरको बाहिरी रङ मन्द खालको हुनुपर्छ। धेरै चम्किलो रङ खासै आकर्षित मानिँदैन।
रङ लगाउँदा अपनाउनुपर्ने सावधानी
स्वास्थ्य जानकारहरूका अनुसार सिल्कलगायतका उच्च गुणस्तरीय रङ छनोट गर्नुपर्छ। निर्माणधीन अवस्थामै रहँदा रङ लगाउन खोज्नु उपयुक्त होइन। घर रङगाउनु अघि आफ्नो क्षेत्र तयार छ कि छैन त्यसतर्फ केन्द्रित हुन जरुरी हुन्छ। रङ लगाइसकेपछि सुक्न पर्याप्त मात्रामा समय दिएको अवस्थामा मानव स्वास्थ्यमा नराम्रो असर पर्दैन। त्यस्तै बजारमा उपलब्ध रङ स्वास्थ्यका लागि हानिकारक छ कि छैन ध्यान पुर्याउनुपर्छ। त्यस्तै बिग्रिएका, मक्किएका भित्ता मर्मत गरेर मात्र कलर गर्नुपर्छ।
पछिल्लो समय रङको बजार दिनानुदिन फस्टाउँदै गएको छ। पेन्ट उद्योग संघका अनुसार नेपालमा वार्षिक ४ अर्ब रुपियाँबराबरको रङको कारोबार हुने गरेको छ। यो पाँच वर्ष अगाडिको तुलनामा दुई गुण बढी हो। रङको व्यापार दशैंको अवसरमा ह्वात्तै बढ्छ। यस अवधिमा अरु समयभन्दा ४० प्रतिशतसम्म माग बढ्ने व्यवसायीको भनाइ छ। विगत केही वर्षता शहरीकरण तथा पुनर्निर्माण कार्यले गति लिन थाल्दा रङको बजार पनि सोही अनुरूप फस्टाउन थालेको छ। सर्वसाधारण घरलाई कसरी आकर्षक देखाउने भन्ने विषयमा बढी केन्द्रित रहँदा रङको खपत बढेको हो।
रङ र स्वास्थ्य
रङ उत्पादक कम्पनीले रङमा लिडको मात्रा क्रमिक रूपमा घटाउँदै लगेका छन्। घर रङ्ग्याउँदा प्रयोग गरिने इनामेलमा उच्च मात्रामा लिड रहेको र यसले मानव स्वास्थ्यमा असर गर्ने भन्दै आलोचना हुन थालेपछि कम्पनीहरूले यसमा सावधानी अपनाउन थालेका छन्।
लिडलेसमा पनि सिल्क, इमल्सन, ड्राइ ग्लसलगायतका रङको प्रयोग उपयुक्त रहेको विज्ञहरूको सुझाव छ। नेपालमा रङ उत्पादन गर्ने उद्योगले ९९ पीपीएमभन्दा बढी लिड प्रयोग गर्न पाइँदैन। मापदण्डमा रहँदै अहिलेको अवस्थामा अधिकांशजसो रङ कम्पनीको रङमा योभन्दा बढी लिड पाइदैन। सस्ता, कमसल तथा बढी लिड भएको रङ प्रयोगले वातावरण तथा मानव स्वास्थ्यमा प्रतिकुल असर पार्ने कुरालाई मध्येनजर गर्दै रङ उत्पादकले गुणस्तरीय रङ उत्पादन गर्न थालेका छन्।
तर केही रङम भने ४ हजार पीपीएमसम्म लिड प्रयोग गरिएको मात्रा भेटिएको छ। यस विषयमा सर्वसाधारण सचेत हुन जरुरी छ। रङमा प्रयोग हुने लिडले सबैभन्दा धेरै असर बच्चाको बौद्धिक विकासमा पर्छ। लिडले श्वासप्रश्वासमा पनि असर गर्छ। उच्च लिडको प्रयागले पुरुषमा उच्च रक्तचाप, नपुंसकता तथा किड्नीमा समस्या ल्याउन सक्छ। त्यस्तै महिलाको महिनावारी बिग्रने, गर्भ तुहिने जस्ता समस्या देखिने गरेको छ। लिड बढी भएको रङकै कारण विश्वमा वर्षमा ६ लाख बालबालिका बौद्धिकता अपांगा हुने र एक लाख ४३ हजार बालबालिकाको मृत्यु हुने गरेको तथ्यांक छ।
संसारका ६२ वटा देशले रङको मापदण्ड पूरा गर्न सफल भए पनि नेपालमा उपलब्ध केही रङले सो मापदण्ड राख्न सकेका छैनन्। तसर्थ सरकारी निकायले रङको मापदण्ड तोकेर चाँडै प्रभावकारी नियम कार्यान्वयन गराउन जरुरी छ। मापदण्ड तोक्ने तर प्रभावकारी कार्यान्वयन नगर्ने हो भने, नेपालले आगामी दिनमा श्रमिक, उपभोक्ता र वातावरणीय क्षति व्यहोर्नु पर्ने निश्चित छ।
मापदण्डभन्दा बढी लिड भएका रङले मानव शरीर र वातावरणमा पार्ने असर र त्यसको रोकथामबारे सबै जानकारी हुन जरुरी छ। प्रयोगकर्ताले लगानी र मुनाफाभन्दा स्वास्थ्यगत फाइदालाई नियाल्न जरुरी हुन्छ। तसर्थ घरमा लगाउन गुणस्तरीय रङ छनोट गरौं, स्वस्थ रहौं, वातावरण जोगाऔं। शहरी क्षेत्रका आधुनिक घर मा विभिन्न किसिमका महँगा रङको प्रयोग गरिए पनि गाउँघरतिरका माटोले बनेका घरमा भने अझै पनि रातो माटो र कमेरो प्रयोग हुने गरेको छ। उपत्यकामा समेत इँटा र माटोले बनेका पुराना घरमा कमेरो लगाउने गरिन्छ। घर रङ्गाउने पारम्पारिक रङमा रातो माटो, कमेरो, कालीमाटी तथा पहेँलो माटो लगायत पर्दछन्।
पाम्परागतरूपमा घर सजाउन स्रोतबाट सफा तथा शुद्ध माटोलाई ल्याएर कम्तीमा एक रात भिजाउने गरिन्छ। यसरी भिजाइएको माटो नरम, तथा लिसाइलो बन्छ। प्रयोग गर्दा भित्तामा लगाई एक दिन सुक्न दिइन्छ। राम्रोसँग सुकेको माटो घरको भित्तामा लामो समयसम्म टिक्छ। यसरी लगाईएको माटो सफा स्रोतबाट भए स्वास्थ्यका दृष्टिले लाभदायक मानिन्छ।
किचेनमा लगाइन रङ
किचन भनेको घरको मुटु हो जहाँ परिवारका सदस्यहरूको बढी नै आवतजावत हुन्छ। हामी किचनमा धेरै समय बिताउँछौं। त्यसैले किचनमा आँखालाई बाधा नपर्ने रङ लगाउनुपर्छ। सकेसम्म इजी क्लिन रङ लगाउनु उपयुक्त हुन्छ किनभने किचन त्यस्तो ठाउँ हो। जहाँ पानी बढी खेलाइन्छ। भान्साका लागि पानीले पनि नबिगार्ने तथा सहजै सफा गर्न सकिने रङ फिट हुन्छ। किचेनमा हरियो बाहेक सबै रङलाई राम्रो मानिन्छ।
बेडरुमका लागि रङ
बेडरुम त्यो ठाउँ हो जहाँ दिनभरिको थकान मेटाउन विश्राम गरिन्छ, बेड रुमले मानिसको रात्री जीवनमा पनि प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने भएकाले मानिसको स्वभाव अनुसार प्रयोग गर्न सकिन्छ। यस्तो ठाउँमा मन शान्त हुने खालका लाइट ब्लु, लाइट पिंक वा अफ ह्वाइट रङ लगाउन सकिन्छ। बजारमा हालसालै देखापरेको सिल्क कलर बेडरुमका लागि उपयुक्त रङ हो। बेडरुमका लागि बिबाहितका लागि वैजनी, हल्का रातो तथा हरियो मध्ये कुनै रङ उपयुक्त हुन्छ। त्यस्तै बेडरुमका लागि अबिबाहितका लागि रातो, हरियो तथा यी दुई मिश्रीतमध्ये कुनै रङ उपयुक्त हुन्छ। विद्यार्थीको कोठाको लागि भने सेतो रङ राम्रो हुन्छ। कालो तथा निलो रङलाई बेडरुममा लगाउन राम्रो मानिदैन।
लिभिङ रुमका लागि रङ
लिभिङ रुम सबैभन्दा पहिले देखिने तथा व्यक्तिको पहिचान झल्किने कोठा हो। तसर्थ, यो अन्य कोठाभन्दा आकर्षित हुनुपर्छ। पर्याप्त प्रकाश आउने कोठा भएकाले यसमा सजावट गर्नुपर्ने अन्य सामग्री राख्न सकिन्छ। सुन्दर देखाउन ब्राइट कलर लगाउनु उपयुक्त हुन्छ। यसमा आफूलाई मन पर्नेगरी जुनसुकै उत्तम रङ छान्नु बुद्धिमता हुन्छ। तर, भद्दा देखिने रङ भने लगाउनु हुँदैन। लिभिङ रुममा खैरो अथवा रातो रङ लगाउन राम्रो हुन्छ।
निर्माण जगतमा देखिएको मिर्मिरे उज्यालो
नेपालमा रेल सपना र सम्भाव्यताको आधार
सबैको सपना सुन्दर घर सुखी परिवार
राष्ट्रिय गौरवका आयोजना किन हुँदैनन् समयमा
ठूला परियोजना निर्माणअघिको झन्झट
नेपालिक्सः ५५ नेपालीको विदेशमा लगानी, स्विस बैंकमा शंकास्पद धनको नेपाल ‘कनेक्सन’
बुद्ध एयरले कोलकाता उडान भर्ने
स्काईवर्थ सीईएस चार अवार्डबाट सम्मानित
सम्पदा ठेक्काबाट नभई मौलिक शैली बनाउनुपर्ने: प्रधानमन्त्री ओली
सौर्य ऊर्जा प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने खाँचो
सम्पदा निर्माणमा खरिद ऐन बाधक देखियो